KATHMANDUTemperature 23°CAir Quality97
नेपालमा पानी ल्याउन चिनियाँ आइदिनुपर्ने, बिजुली ल्याउन चिनियाँ आइदिनुपर्ने, बाटो खोल्न चिनियाँ आइदिनुपर्ने । अब हुँदाहुँदा एटीएम चोर्न पनि चिनियाँ नै आइदिनुपर्ने
राजधानीमा फेरि एक बथान चिनियाँ अपराधी पक्राउ परेछन् । एकैचोटि १ सय २२ जना । नेपालमा चिनियाँ सहयोग बढिरहेको छ भन्थे, हो रहेछ । ६ महिनाअघि ६–७ जना पक्राउ परेका थिए । अब त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर १ सय २२ पुगेछ । चीनले जस्तो विकास हामीले कहिले गर्ने हो खोइ ?
चीन यति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । हामी भने हरेक कुरामा परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौँ । हुँदाहुँदा अब अपराधमा समेत हामी परनिर्भर हुने अवस्था आइसकेको छ । परनिर्भरताको योभन्दा ठूलो दुर्दशा अरु के होला ? नेपालमा पानी ल्याउन चिनियाँ आइदिनुपर्ने, बिजुली ल्याउन चिनियाँ आइदिनुपर्ने, बाटो खोल्न चिनियाँ आइदिनुपर्ने । अब हुँदाहुँदा एटीएम चोर्न पनि चिनियाँ नै आइदिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्न पनि चिनियाँ नै आइदिनुपर्ने ! ए बाबा, कमसेकम अपराधमा त हामी आफैँ आत्मनिर्भर बनौँ । अपराधसमेत हामीलाई अरुले आएर गरिदिनुपर्ने ?
निराश भएका मानिस भन्ने गर्थे– अब यो देशको भविष्य छैन । अहिलेचाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थालेको छ । हाम्रोमा रेमिट्यान्स विदेशबाट आउँछ, आर्थिक सहयोग विदेश–विदेशबाट आउँछ, कारखाना खोल्नुपरे विज्ञ विदेशबाट आउाछन्, अब त बालुवा बोक्ने ज्यामीसमेत विदेशबाट आउँछन् । अहिले त स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भन्दा अपराध गर्ने अपराधीसमेत विदेशबाट आउन थालिसके । जम्मै कुरा विदेशीले गर्ने हो भने हामीचाहिँ के गर्ने नि ? अनि यस्तो देशको भविष्य होला र ?
पर्यटन, होटल व्यवसायमा कार्यरत कयौँ नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने कतिपय नेपाल फिर्ती...
'१३ वर्षमै बच्चा पाउँदा' शीर्षकमा प्रकाशित सामग्रीमा हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीद...
हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षको खण्डन, नेपाल सम्वाददाताको जवाफ
आगामी महाधिवेशनका सभापति दावेदार रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास...
कांग्रेसका दुई किनारा